A Teen Guide to Overcoming Inferiority Complex
Help & Support Other Topics Personal Growth Upgrade Yourself
လူငယ်များ၏ စိတ်အားငယ်မှု၊ အငုံ့စိတ်ကို ကျော်လွှားနိုင်ခြင်းနည်းလမ်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားလူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်ဟာ ကိုယ့်ကိုကို ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို သိမ်ငယ်စေခြင်းနှင့် နှိမ့်ကျစေခြင်းရဲ့ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားလူများနှင့် မသိစိတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သိစိတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဟာ တူညီတဲ့လူ့သဘော သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အခြားပေတံ သို့မဟုတ် အခြားစံနှုန်းတွေထားပြီး အဲ့ဒီအတိုင်း နေထိုင်ဖို့ကြိုးစား ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်အရွယ်အနေအားဖြင့် ၄င်းစံနှုန်းများ ရင်ဘောင်တန်း မလိုက်နိုင်ခြင်းကို ကျရှုံးမှုဆိုပြီး ခံယူ ယုံကြည်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့အမှန်ကတော့ အမြဲပြောလေ့ရှိတဲ့အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပြိုင်ဘက်ကင်းပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်အားဖြင့် မတူကွဲပြားကြပြီး နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအရာဟာ ဥပမာအားဖြင့် ဉာဏ်ပညာ၊ ကျော်ကြားမှု၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း သို့မဟုတ် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟူသော အရာများ၌သာ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ထက်ကောင်းသာလွန်ခြင်းဆိုတာ လုံးဝမရှိနိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ခြင်း အတွက် မှန်ကန်ခြင်းဆိုတာ ဘာတစ်ခုမျှ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင်ဟာ နှိမ့်ကျစိတ်ခံစားမှုမျိုး ခံစားနေရင် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်အရှိအမှန်အတိုင်းနေထိုင်နေတာလား သို့မဟုတ် အခြားလူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နေတာလား ဆိုတာ ကို့ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ။
လူတွေဟာ မတူညီတဲ့အပိုင်းတွေမှာ ထူးချွန်ြ့ပီး တစ်စုံတစ်ရာ၌ တစ်နည်း မဟုတ်တစ်နည်း အလွန်ထူးကဲအောင်လုပ်နှိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုံတစ်ရာ၌ ထူးချွန်ခြင်းဟာ လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့စွမ်းရည်နှင့် ပြိုင်စံရှားတဲ့အပိုင်း တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခု၌ ထူးကဲမှုဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ကို့ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့ရှုထောင့်တွေကို အပြင်းအထန်ပြောင်းလည်းစေနိုင်တယ်။ ရင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အားအင်တွေပြန်မွေးထုတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုကို လုပ်ဆောင်ရာ၌ စိတ်အားထက်တန်စေရန်အပြင်းအထန် တိုက်တွန်းပေးပြီး အခြားလူတွေဘယ်လို စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကို မေ့လျော့စေပါတယ်။ ကိုယ်နှင့်ကိုက်ညီသည့် နယ်ပယ်ကို ရှာဖွေပြီး မတူညီတဲ့တစ်စုံတစ်ရာ၌ထူးကဲအောင်စွမ်းဆောင်ပါ။
ကိုယ့်ကိုကို ယြုံ့ည်မှုဟာ သင်လုပ်သမျှအရာတိုင်း၌ ဖြည့်တင်းနိုင်သော အခကြေးငွေမဲ့တဲ့တန်ဖိုးရှိအရာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ နည်းလမ်းစဉ်တွေမှာ တောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာနှိမ့်ကျစိတ်ထားဖွဲ့စည်းမှု ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေလျှင် သင့်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် နှိမ့်ကျတဲ့စိတ်ကို သင်ခံစားရပါတယ်။ ဒါဟာ လူတွေရှေ့မှာ ကို့ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကို့ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိ ဟန်ပြုမူခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ကို့ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိခြင်းဟာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ ပြီးမြောက်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ပြောင်းလည်းစေပြီး သင်ဟာ ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိရှိကြောင်း လူတွေကို ပေါ်လွင်စွာယုံကြည်စေပြီး သင့်ကိုပို၍ ယုံကြည်အားထားထိုက်သည့် လူဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတယ်။ ထို့ကြောင့် ကို့ကိုယ်ကို ယြုံ့ည်မှုရှိခြင်းဟာ လုပ်ငန်းများ အောင်နိုင်စေသည်သာမက လူတွေရဲ့ နှလုံးကိုပါ အောင်နိုင်စေပါတယ်။ နှောက်ဆုံးရလဒ်အားဖြင့် သင်ဟာ သာမန်အရာတွေကို လုပ်နေခြင်း၌ အဆင်ပြေချောမွေ့လာပြီး သင်ရဲ့ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေမှု အဆင့်ကိုပါမြင့်တင်ပေးတယ်။ နှောက်ဆုံးအားဖြင့် သိမ်ငယ်နှိမ့်ကျမှုခံစားချက်ဟာ ပြဿနာဖြစ်တော့မှ မဟုတ်ပါဘူး။
နှိမ့်ချခြင်းစိတ်ထားဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို သီးသန့်ဖြစ်စေတာ သို့မဟုတ် လူထုကို ရှက်ကြောက်စေခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီတော့ အဲလိုခံစားချက်များပေါ်လာပြီဆိုပါက အခြားလူတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းခြင်း ကိုရွေးချယ်ခြင်းက သင့်ရဲ့ ကြောက်စိတ်ကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး သင်မလုပ်ချင်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့နေခြင်း လူဝင်ဆဲ့မဲ့ ကိစ္စများကို အသေအခြာလုပ်ဆောင်ပါဝင်ပါပါ။ လူတွေနဲ့ အချိန်များစွာ အသုံးပြုခြင်းဟာ လူတွေအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလာစေပြီး ၄င်းဟာ ကိုယ့်ကိုကို စမ်းစစ်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိထားမိနိုင်ရန် မဟာနည်းလမ်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လူငယျမြား၏ နှိမျ့ကသြောစိတျထားဖှဲ့စညျးမှုကို ကြျောလှားနိုငျခွငျးနညျးလမျး
ကိုယျ့ကိုယျကို အခွားလူမြားနှငျ့ နှိုငျးယှဉျခွငျးကို ရပျတနျ့လိုကျပါ။
ကြှနျုပျဟာ ကိုယျ့ကိုကို ကိုယျ့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြရှိသူငယျခငျြးမြား၊ လုပျဖျေါကိုငျဘကျမြားနှငျ့ နှိုငျးယှဉျခွငျးဟာ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ကြှနျုပျတို့ကို သိမျငယျစခွေငျးနှငျ့ နှိမျ့ကစြခွေငျးရဲ့ အရငျးအမွဈဖွဈပါတယျ။ ကြှနျုပျတို့သညျ ကိုယျ့ကိုယျကို အခွားလူမြားနှငျ့ မသိစိတျဖွငျ့သျောလညျးကောငျး၊ သိစိတျဖွငျ့သျောလညျးကောငျး နှိုငျးယှဉျခွငျးဟာ တူညီတဲ့လူ့သဘော သဘာဝဖွဈပါတယျ။ ကြှနျုပျတို့ဟာ အခွားပတေံ သို့မဟုတျ အခွားစံနှုနျးတှထေားပွီး အဲ့ဒီအတိုငျး နထေိုငျဖို့ကွိုးစား ကွပါတယျ။ ကြှနျုပျတို့ အသကျအရှယျအနအေားဖွငျ့ ၎င်းငျးစံနှုနျးမြား ရငျဘောငျတနျး မလိုကျနိုငျခွငျးကို ကရြှုံးမှုဆိုပွီး ခံယူ ယုံကွညျကွတယျ။ ဒါပမေဲ့အမှနျကတော့ အမွဲပွောလရှေိ့တဲ့အတိုငျး ကြှနျုပျတို့ဟာ ပွိုငျဘကျကငျးပဲ။ ကြှနျုပျတို့ဟာ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျအားဖွငျ့ မတူကှဲပွားကွပွီး နှိုငျးယှဉျခွငျးအရာဟာ ဥပမာအားဖွငျ့ ဉာဏျပညာ၊ ကြျောကွားမှု၊ ဆှဲဆောငျမှုရှိခွငျး သို့မဟုတျ ခမျြးသာကွှယျဝမှုဟူသော အရာမြား၌သာ ရနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တဈစုံတဈယောကျဟာ အခွားတဈစုံတဈယောကျထကျကောငျးသာလှနျခွငျးဆိုတာ လုံးဝမရှိနိုငျပါ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော အဲ့ဒီထုတျပွနျခွငျး အတှကျ မှနျကနျခွငျးဆိုတာ ဘာတဈခုမြှ မရှိသောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ သငျဟာ နှိမျ့ကစြိတျခံစားမှုမြိုး ခံစားနရေငျ သငျဟာ သငျ့ကိုယျသငျအရှိအမှနျအတိုငျးနထေိုငျနတောလား သို့မဟုတျ အခွားလူမြားနှငျ့နှိုငျးယှဉျနတောလား ဆိုတာ ကို့ကိုယျကို ပွနျမေးကွညျ့ဖို့ကွိုးစားပါ။
လူတှဟော မတူညီတဲ့အပိုငျးတှမှော ထူးခြှနျွ့ပီး တဈစုံတဈရာ၌ တဈနညျး မဟုတျတဈနညျး အလှနျထူးကဲအောငျလုပျနှိုငျပါတယျ။ တဈခုံတဈရာ၌ ထူးခြှနျခွငျးဟာ လူတိုငျးပိုငျဆိုငျခငျြတဲ့ ကြှနျုပျတို့စှမျးရညျနှငျ့ ပွိုငျစံရှားတဲ့အပိုငျး တဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ တဈစုံတဈခု၌ ထူးကဲမှုဟာ ကြှနျုပျတို့ ကို့ကိုယျကိုမွငျတဲ့ရှုထောငျ့တှကေို အပွငျးအထနျပွောငျးလညျးစနေိုငျတယျ။ ရငျးဟာ ကြှနျုပျတို့ရဲ့ အားအငျတှပွေနျမှေးထုတျခွငျး၊ ကြှနျုပျတို့၏တိုးတကျမှုကို လုပျဆောငျရာ၌ စိတျအားထကျတနျစရေနျအပွငျးအထနျ တိုကျတှနျးပေးပွီး အခွားလူတှဘေယျလို စှမျးဆောငျနိုငျခွငျးကို မလြေ့ော့စပေါတယျ။ ကိုယျနှငျ့ကိုကျညီသညျ့ နယျပယျကို ရှာဖှပွေီး မတူညီတဲ့တဈစုံတဈရာ၌ထူးကဲအောငျစှမျးဆောငျပါ။
ကိုယျ့ကိုကို ယွုံ့ညျမှုဟာ သငျလုပျသမြှအရာတိုငျး၌ ဖွညျ့တငျးနိုငျသော အခကွေးငှမေဲ့တဲ့တနျဖိုးရှိအရာဖွဈပွီး သငျ့ရဲ့ နညျးလမျးစဉျတှမှော တောငျလုပျနိုငျပါတယျ။ အကယျ၍ သငျဟာနှိမျ့ကစြိတျထားဖှဲ့စညျးမှု ဒုက်ခသညျဖွဈနလြှေငျ သငျ့ရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးအားဖွငျ့ နှိမျ့ကတြဲ့စိတျကို သငျခံစားရပါတယျ။ ဒါဟာ လူတှရှေမှေ့ာ ကို့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိခွငျး သို့မဟုတျ ကို့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိ ဟနျပွုမူခွငျးကို ဖွဈစပေါတယျ။ ကို့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိခွငျးဟာ လုပျရိုးလုပျစဉျမြား ပွီးမွောကျခွငျးနညျးလမျးမြားကို ပွောငျးလညျးစပွေီး သငျဟာ ကိုယျဘာလုပျနတေယျဆိုတာ သိရှိကွောငျး လူတှကေို ပျေါလှငျစှာယုံကွညျစပွေီး သငျ့ကိုပို၍ ယုံကွညျအားထားထိုကျသညျ့ လူဖွဈလာအောငျ စှမျးဆောငျပေးတယျ။ ထို့ကွောငျ့ ကို့ကိုယျကို ယွုံ့ညျမှုရှိခွငျးဟာ လုပျငနျးမြား အောငျနိုငျစသေညျသာမက လူတှရေဲ့ နှလုံးကိုပါ အောငျနိုငျစပေါတယျ။ နှောကျဆုံးရလဒျအားဖွငျ့ သငျဟာ သာမနျအရာတှကေို လုပျနခွေငျး၌ အဆငျပွခြေောမှလေ့ာပွီး သငျရဲ့ပြျောရှငျ အဆငျပွမှေု အဆငျ့ကိုပါမွငျ့တငျပေးတယျ။ နှောကျဆုံးအားဖွငျ့ သိမျငယျနှိမျ့ကမြှုခံစားခကျြဟာ ပွဿနာဖွဈတော့မှ မဟုတျပါဘူး။
နှိမျ့ခခြွငျးစိတျထားဟာ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ကြှနျုပျတို့ကို သီးသနျ့ဖွဈစတော သို့မဟုတျ လူထုကို ရှကျကွောကျစခွေငျးကို ဖွဈစပေါတယျ။ ဒီတော့ အဲလိုခံစားခကျြမြားပျေါလာပွီဆိုပါက အခွားလူတှနေဲ့ အခြိနျဖွုနျးခွငျး ကိုရှေးခယျြခွငျးက သငျ့ရဲ့ ကွောကျစိတျကို ဖြောကျဖကျြဖို့အကောငျးဆုံးဖွဈပွီး သငျမလုပျခငျြဆုံးအရာဖွဈတဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့နခွေငျး လူဝငျဆဲ့မဲ့ ကိစ်စမြားကို အသအေခွာလုပျဆောငျပါဝငျပါပါ။ လူတှနေဲ့ အခြိနျမြားစှာ အသုံးပွုခွငျးဟာ လူတှအေကွောငျး ပိုမိုသိရှိလာစပွေီး ၎င်းငျးဟာ ကိုယျ့ကိုကို စမျးစဈရနျ ပိုမိုကောငျးမှနျသော နညျးလမျးနှငျ့ ကြှနျုပျတို့ကို ကြှနျုပျတို့ သတိထားမိနိုငျရနျ မဟာနညျးလမျးကောငျး တဈခုဖွဈပါတယျ။
Comparing ourselves to people around us – our friends and co-workers – is usually the source of feeling small or having inferiority complex. It isacommon human nature to compare ourselves to other people in conscious or unconscious ways. We tend to setabenchmark orastandard and try to live up to that, believing that not being able to keep abreast with people of our own age in certain aspects isafailure. But the truth is, as cliché as it sounds, we are unique. We are different in our own ways and comparison among people is only possible withinaparticular context, for example, like intelligence, popularity, attractiveness or wealth. Hence, there is absolutely no such thing as ‘a person is better than another’ because there isn’t any plausible grounds for suchastatement. Therefore, if you tend to suffer from inferiority complex, try to ask yourself if you’re staying true to yourself and if you’re trying to compare yourself to other people.
People are good at different things and can excel at something one way or another. Being good at doing something is ‘our selling point’ or our unique aspect. Excellence at something can drastically change the perspective we have on ourselves. It urges us to become keener in refining our strengths and make improvements and forget about how other people perform. Find your niche, and try to excel at something different.
Add confidence to your routines
Confidence is the most priceless value you can add to anything you do – even your routines. If you’reavictim of inferiority complex, it’s apparent that you’re feeling inferior aboutapart of yourself. This can be fixed be acting confident and assertive in front of the people. Confidence alters the way routines are being done and it apparently makes people believe that you know what you’re doing and take you forareliable person. So confidence lets us win not just the game but also the favour of people. Asaend result, you’d become more comfortable in doing ordinary things and even step out of your comfort zone and ultimately, feeling invisible or inferior would no longer be an issue.
Inferiority complex usually causes us to become reserved and timid of other people. So if this happens, choosing to hang out with people more often is the best way to counter your fears and do exactly something you wouldn’t want to do most of the time - socializing. Spending time withalot of people allows us to get to know more about them, which also isagreat way to be able to explore ourselves better and become more aware of ourselves.
Soft skills every fresh graduate needs at workplace, and how to earn them?